Kuti urambe uchienderera mberi nekutsigirwa kwako kunonyanya kudiwa. Nokubatanidza iyi sachigaro unotsigira basa raMartin Vrijland nemupiro. Kana iwewo uchida mamiriyoni evanhu kuti akwanise kuverenga maonero akasiyana ehau gore negore, rubatsiro rwako runogamuchirwa. Zviri kwauri iwe kuti unoda kupa sei zvakawanda. Nokuva nhengo iwe unondibatsira kuti ndirambe ndichipona pasinei nekurwisana kwevanhu vangu.
Kupiwa kweimwe-nguva - € 50,00 - unlimited
Total Visits: 14.639.823